Maoritania : Antomotra ny Fifidianana Solombavam-bahoaka, Nosamborin’ny Fitondrana i Biram Dah Abeid, Ilay Mpikatroka Mpanohitra Ny Fanandevozana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2018 12:23 GMT
Biram Dah Abeid – Sehatra ho an'ny daholobe
Efa niha-nanakaiky ny fifidianana solombavam-bahoaka tany Maoritania, nefa mbola nofaizin'ny fitondrana ihany ilay “Initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA) [ Finiavana Hamerina indray ny Hetsika Fanafoanana ny Fanandevozana ]” tamin'ny nisamborany ny mpitarika azy Biram Dah Abeid, ny 7 aogositra, sy mpikambana iray ao amin'io fikambanana io, Abdellahi el Housein Mesoud, ny 9 aogositra noho ny fitarainana napetraky ny mpanao gazety iray momba iry voalohany.
Ao anatin'izany henjikenjika izany, dia voasambotra tamin'ny 8 Aogositra ihany koa ny mpanao gazety anankiroa Babacar Ndiaye, mpitantana ny vavahadin-tserasera Cridem sy i Mahmoudi Ould Saibout, mpanao gazety ao amin'ny Taqadoum noho ny nandraisany indray ilay lahatsoratra mahakasika ilay mpisolovava iray akaiky ny fitondrana maoritaniana.
Ampahafantarin'ny Amnesty International fa tsy nisy didy naseho tamin'ny fisamborana an'i Biram Dah Abeid, mpitolona manohitra ny fanandevozana, ankoatra izay, nahazo ny Lokan'ny Fiarovana ny Zon'olombelona avy amin'ny Firenena Mikambana. Ambonin'izany, avoitran'ilay ONG ireo tsy fanarahan-dalàna hafa mikasika ny fitazonana an'i Birman Dah Abeid sy ireo namany :
Im-betsaka ny mpisolovava an'i Biram Dah Abeid sy i Abdellahi el Housein Mesoud no nosakanana tsy hiresadresaka amin'ireo olona arovany any am-ponja …
Efa voaloton'ny tsy fanarahan-dalàna sahady ireo fitsaràna an'i Biram Dah Abeid sy i Abdellahi el Housein Mesoud, indrindra fa notazonina tsy nisy porofo nandritra ny 48 ora mahery izy ireo sady tsy afaka niresaka akory tamin'ny mpisolovava azy. Ireto farany ankoatra izay tsy afaka nahazo ireo atontan-taratasy fiampangana nampiasaina mba hitazonana ireto lehilahy roa ireto. .
Voasambotra i Babacar Ndiaye, mpitantana ny vavahadin-tserasera Cridem sy i Mahmoudi Ould Saibout, mpanao gazetin'ny Taqadou rehefa notorian'ny mpisolovava maoritaniana iray miasa any Frantsa, momba ilay lahatsoratra navoakany. Amin'izao fotoana izao mbola tsy voampanga izy ireo.
Omen'ny tranonkala africanews.com ny antsipirihany momba io raharaha io :
Voasambotra tao amin'ny trano fonenany tao Nouakchott, renivohitra, ilay maoritaniana mpilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny volana septambra, Biram Dah Abeid, mpikatroka mafana fo amin'ny fanoherana ny fanandevozana ary nogadraina any amin'ny faritra atsimon'ny tanàna …. Nampahafantarin'ny mpitandro filaminana ny fitarainan'ilay mpanao gazety iray izay niampanga an'i Birman Dah Abeid ho nandrahona azy.
Fanalàna baràka mazava be, hoy ireo mpikambana ao amin'ny hetsika misy azy IRA (Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste) izay mikiakiaka ny tetika politika maizina.
Fanaovana fitaovana ny fitsaràna no fahitàn'i Bakala Kane io fisamborana an'i Biram io, hoy ny fanazavàny ao amin'ny kassataya.com :
Efa ho lasa lalaon'ny fitondrana Ould Aziz io tsy fiovàn'ny fanaovana ny fitsaràna ho fitaovana noho ny resaka politika io. Ho an'ireo mpanaramaso, fanitsakitsahana goavana ny fahafahana sy lalàm-panorenana izany. Miantso ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena ho amin'ny fanafahana azy tsy misy fepetra ireo frantsay sy belza mpisolovavan'ny mpitarika Hratin. .
Taterin'i Diko Hanoune/ maoritaniana mpandala ny fanafoanana ny fanandevozana ao amin'ny guidumakha.com ireo fepetra ara-materialy itazonana ny filohan'ny IRA-Maoritania :
Tonga any Riyadh hanampy ireo mpitandro filaminana eto an-toerana ilay kaomandin'ny tobin'ny mpitandro filaminana, rehefa nanao hetsika hitakiana ny fanafahana ny mpitarika azy ireo ny mpikatroka ao amin'ny IRA, tena ratsy ny fijerin'io kaomandy io ireo atontam-pako manodidina ny filohan'ny IRA ao amin'ny tranomaiziny. Nanapakevitra ny hanadio ny rehetra izy. Nefa tsy misy fanaka ilay efitrano maizina ao anatin'ny kaomisarian'ny polisy, sady tsy misy varavarankely ary isak'izay mihetsika dia mandrakotra ny karipetra sy ny lamban'i Biram Dah Abeid ary ny fitafiany ny fasika.
Tsy azo iainana ny trano fidiovana ary manamaimbo ny kaomisaria manontolo izany ; tsy ahafahana mivoaka any amin'ny làlantsara, miaina sy matory ny fofona mantsina. Mifanaretsaka sy mandro ary maty ao amin'ny trano fidiovana ireo bibikely sy katsatsaka. Tsy ahitana fahadiovana ao amin'io efitra maizina io ary tsy nisy fepetra fanadiovana noraisina tato anatin'ny 6 andro.
Asehon'i Cheikh Aïdara ao amin'ny bilaoginy blog aidara.mondoblog.org, ny tahotry ny fitondràna ka nahatonga azy hikaroka izay hanakanana ny fifidianana an'i Birame amin'ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny 1 septambra ho avy izao :
Androany, nahavita nanamafy fifanarahana “samy mahazo” tamin'ny antoko Sawab ny IRA. Fiarahamiasa izay bantian'ny sampana afrikana-maintin'ilay hetsika izay tsy tara amin'ny fitabatabana hoe famadihana. Loha-lisitra amin'ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny anaran'ilay fiarahamiasa i Birame, loza mitatao no fahitan'ilay rafitra ny fidirany ao amin'ny parlemanta. Fanomezana azy ny sehatra malalaka sy tsimatimanota mandritra ny dimy taona izany, nefa laza ihany koa izay mampitombo ny maha-izy azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Izany no nahatonga tsirin-kevitra fikononkononana hevi-dratsy amim-pahamalinana mba hanalavirana an'i Birame amin'ireo fiantsoana ny mpifidy izay tsy hieritreretan'ny fitondràn'i Mohamed Abdel Aziz hanome azy vintana na dia kely aza mba ho lasa solombavambahoaka.
Hazavain'i Biram Dah Abeid ao amin'ny taratasy nosoratany avy tao amin'ny efitra figadrany ao amin'ny fonjan'i Nouakchott, tamin'ny 15 aogositra, ny fifanolanana misy eo aminy sy ny fitondrana :
Mbola mitoetra foana ny lonilony efa an-jato taona, izay ezahanay, miaraka, manadio eo amin'ny miaramilan'ny fireneko sy izaho ; avy amin'ny asanay roa tonta, tsy voavidim-bola, no ikorinan'ny ranon'afero anaty sy itelemana ny lolompo, fahatomombanana tsy azo refesina loatra. Ny fikomiana tsy amin'antony nataon-dry zareo tsy araka ny fotoana no mampahery ahy sy mampangoraka ny fo : na izany aza, amin'ny maha-mpiandry ny mandan'ny tanàna izay antenaina fa hirodana azy ireo, mbola mihizingizina ry zareo ary mino fa tsy ho vita ny hianika io manda io. Nefa ao anivon-dry zareo, misy miseho, tsy miasa velively raha tsy efa fantatr'izy ireo, iantsorohako ny fandravana io trano mahatsiravina io, izay ny ràn'ny razako no nanafaka hetaheta sy mihazona azy hijoro. Isanandro, manongotra biriky iray amin'io trano io aho ary mandrava ny ila-rindrina ihany koa ; tsara kokoa, manomboka izao, tsy irery [intsony] aho amin'ny asa.
Tsahivin'ny tranonkala africanews.com ny fomba mbola iainan'ny 20 isan-jaton'ny vahoaka Maoritaniana ny fanandevozana :
Na efa nanomboka tamin'ny 1981 aza ny tsy maha-ara-dalàna azy any Maoritania, dia mbola misy foana ny fanandevozana ao amin'ny firenena araka lazain'ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona. Vinavinain'ireto farany ho ny 20%-n'ny mponina no olona miaina mandrakariva amin'ny fanompoana, voatery miasa amin'ny toeram-pambolena na miasa an-trano ary tsy mahazo fahalalahana, fanabeazana na karama.
Avy amin'ny vondrom-piarahamonina haratine sady zanaka andevo i Biram Dah Abeid, izy no nanorina ny Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste tamin'ny 2008. Voasambotra matetika noho ny fanolorantenany hiady amin'ny fanandevozana izy, vao tamin'ny 2016 izy no nafahana rehefa avy nigadra 20 volana.
Tamin'ny 13 aogositra, nampangaina i Biram Ould Dah Ould Abeid rehefa notazonina 6 andro, raha tokony ho 48 ora, ary voampanga ho “manohintohina ny fahamendrehan'ny hafa”, “mihantsy herisetra”, “mandrahona ny hanao hersietra” i Biram Dah Abeid raha toa ka “firaisana tsikombakomba” no niampangana an'i Abdellahi el Housein Mesoud.